रूसी, सोभियत रसायनविद् नीना Andreeva: जीवनी, आविष्कारहरू, उपलब्धिहरू र रोचक तथ्य
हामी पछि राजनीतिक नेताहरूले भइन् प्राध्यापकहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूले, धेरै थाहा? आजकल मानिसहरू विशेष शिक्षा, वा ठूलो उद्यमको वरिष्ठ अधिकारीहरु संग राजनीतिज्ञ भन्दा बढी अक्सर छन्। तर perestroika को वर्ष मा, कुरा केहि फरक थिए। , मानिसहरूको लागि राम्रो जीवन चाहने जनता आफ्नो विचार ल्याउन - जो पार्टी सिर्जना ती, एक लक्ष्य थियो। तिनीहरूले एक ठाउँ लो लक्ष्य थिएन "को गर्त मा।" नीना - राम्रो संसार बनाउन चाहने ती को सरल नागरिकहरु को एक, सोभियत संघ को अनुसन्धान संस्थान को एक शिक्षकको भयो।
Andreeva नीना Aleksandrovna - रूसी रसायनविद् र राजनीतिज्ञ सोभियत र आधुनिक रूस। सार्वजनिक सधैं यो सकारात्मक कथित छैन भन्ने तथ्यलाई बावजुद महिला इतिहास को पाठ्यक्रम प्रभावित गर्न सक्षम थियो। यसको लोकप्रियता 78 वर्षीया महिलाले निबंध (लेख Andreeva) को प्रकाशन पछि प्राप्त गरेको छ "म सिद्धान्तहरूमा सम्झौता गर्न सक्दैन।" केही आलोचकहरु यो पाठ सोभियत संघ संकुचन किन कारण एक हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तर यो साँच्चै हो? गरेको छानबिन गरौं।
जीवनी: नीना Andreeva
अक्टोबर 12, 1938 Leningrad (सोभियत संघ) मा एक केटी, नीना जन्म भएको थियो। उनको बुबा एक सरल पोर्ट कार्यकर्ता थियो। उहाँले दोस्रो विश्व युद्ध को समयमा अगाडि मा मृत्यु भयो।
Nina Andreeva को Kirov बिरुवालाई मिस्त्री काम गर्ने आमा आफ्नो शिक्षा पाए। युद्ध भावी रसायनविद् आफ्नो बुबा, तर पनि दाइ र बहिनी मात्र होइन लिए।
बाल्यकाल देखि, नीना Andreeva विज्ञान प्रेम गर्नुभयो। त्यो लगनशील भई विद्यालयमा अध्ययन, त्यसैले यसको पूरा गर्न को लागि एक सुन पदक सम्मानित गरिएको थियो। प्राप्त माध्यमिक शिक्षा भइरहेको, एक जवान महिला एक विशेषता र रसायनविद् को पेशा छान्ने, प्रविधि को Leningrad संस्थान प्रविष्ट गर्नुभयो। तर यो विशेष प्रशिक्षण लागि प्रदान जो विज्ञान नै, र उच्च छात्रवृत्ति, अधिक रुचि छ। समयमा केटी ठूलो वित्तीय अफ्ठ्यारो अनुभव थियो। स्नातक पछि एक युवा महिला को विशेषज्ञता spetskeramikoy संग काम गर्न थालिन्।
Nina Andreeva सम्मान संग कलेज स्नातक। पछि, एकदम सफलतापूर्वक पोस्ट-स्नातक अध्ययन पूरा र प्राविधिक विज्ञान मा एक डिग्री प्राप्त।
काम को वर्ष
स्नातक पछि, नीना Andreeva पोस्ट शोधकर्ता मा क्वार्ट्ज गिलास को अनुसन्धान संस्थान मा काम गरे। यो निम्न, त्यो प्रौद्योगिकी को Leningrad संस्थान मा भौतिक रसायन को विद्यार्थी सिकाउनुभयो।
1966 मा, त्यो आफूलाई एक नास्तिक विचार, सोभियत संघ को कम्युनिष्ट पार्टी सामेल भए। अग्रसर Andreeva नीना Aleksandrovna व्यवस्थापन, विज्ञान सधैं पहिलो सब छ जसको लागि को निर्णय गरेर, त्यो उनको काम बाट खारेज गरिएको थियो। त्यो पार्टी बहिष्कार गरिएको थियो। तर 1981 मा, नीना Alexandrovna र पारित निरीक्षण नागरिक पीडीए (सीसी CPSU) पछि पोस्ट, र सदस्यता मा पुनःस्थापित।
Chikin वैलेन्टिन, अखबार "सोभियत रूस" को मुख्य सम्पादक, उनको प्रसिद्ध लेख प्रकाशन अघि Andreeva बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्दा, विश्वविद्यालय प्रशासन महिलाहरु काम सबै समय को सबै भन्दा रंगीन वर्णन संग पत्रकार प्रदान गर्न भनेर भन्नुभयो। र नीना Andreeva 1972 देखि 1991 सिकाउनुभयो।
Baiting Andreeva र पेशा को परिवर्तन
अखबार मा 1988 को सुरुमा "सोभियत रूस" एउटा लेख, नीना Andreeva द्वारा लेखिएको छ जो प्रकाशित "म सिद्धान्तहरूमा सम्झौता गर्न सक्दैन।" तीन हप्ता पछि, यो लेख मा "सत्य" disavowed लेखिएको थियो "पुनर्गठन को सिद्धान्त:। क्रांतिकारी सोचाइ र कार्य"
यो पछि, सतावट Andreeva। यो सबै उनको पति, नीना Alexandrovna धेरै हृदय आक्रमण भोगे भनेर समाप्त, तर धेरै शिक्षक काम को ठाउँमा "escorted"।
के अर्को छ?
यो पक्कै पनि Andreeva जीवन मा एक कठिन मोड थियो। तर 1989 मा, त्यो सबै-संघ समाज (पार्टी) "एकता", Leninism र रूसी राजनीतिक आदर्श बचाव लाग्यौं। 1991 मा, एन्ड्रीव पार्टी को नेता "Bolshevik को CPSU को प्लेटफर्म" भयो
र त्यसै वर्ष को शरद ऋतु को अन्त संग, नीना संगठन को टाउको हुन्छ "सबै-संघ कम्युनिष्ट पार्टी।" तर हाम्रो हेरोइन अनुसार, त्यो शक्ति खोजीमा कहिल्यै थियो। यो सबै आफैमा भयो।
कि संस्थान को विद्यार्थीहरू अघि व्याख्यान पछि "समाजवाद अजेय छ।" यस मामला मा, एक महिला राजनीतिज्ञ, एक ठूलो नेता, एक भद्र पाँच-मंजिल्ला घर बस्थे दैनिक जीवनको सुधार गर्न सम्बन्धित समस्याको bothering छैन।
यसको फलदायी राजनीतिक गतिविधि नीना Andreeva समय संग समानान्तर मा पुस्तकहरू लेख्न र लेख प्रकाशित:
368 पृष्ठहरू संग्रह: "Nepodarennye सिद्धान्तहरू, वा perestroika एउटा संक्षिप्त इतिहास", 1993।
1992 "निन्दा समाजवाद अस्वीकार्य छ"।
, 2002 "कम्युनिस्ट आन्दोलन मा Bolshevism लागि" लेक्चर को संग्रह।
2 पृष्ठ को प्रसिद्ध लेख - "म दिन सक्दैन अप सिद्धान्तहरू", 1988।
तिनीहरूले प्रसिद्ध लेखमा के भने?
वसन्त मा, मार्च 13, Andreeva लेख 1988 मा, "म सिद्धान्तहरूमा सम्झौता गर्न सक्दैन।" प्रकाशित भएको थियो पत्र को पाठ सोभियत शिक्षकको हृदय देखि एक कराउँदै छ। लेख को पुनर्गठन योजना कार्यान्वयन सुरु गरेपछि समाजवाद र stalin नीतिको आलोचना गर्न थाले जसमा मिडिया मा प्रकाशित सामाग्री, निन्दा गर्नुभयो।
एन्ड्रीव पाठ्यक्रम, सबै सोभियत मान्छे जस्तै, यो त्यहाँ massacres थिए जब सोभियत संघ पटक, को नेतृत्व को नीति नकारात्मक मनोवृत्ति छ, भने, मान्छे को बिरुद्ध reprisals लगे (30-40s)। तर नीना यो मिडिया मा गरेको छ रूपमा, सम्पूर्ण रूपमा पहिलेका नेताहरूको नीतिहरू मा आफ्नो रिस वितरण गर्न आवश्यक छ कि बाहिर पोइन्ट रूपमा।
आफ्नो पत्रमा stalin पूर्ण प्रशंसा मा Andreeva। को सुरक्षा तर्क रूपमा महिला चर्चिल एक नक्कली पत्र जान्छ। शिक्षक stalin नीतिको नै पार्टी र वर्ग मूल्यांकन फर्केर जान आवश्यक छ। एन्ड्रीव अनुसार, के distorts इतिहास तथ्य प्रतिस्थापन पाठ को लेखन को समयमा प्रेस मा भने थियो।
लेखक समाजवाद आलोचना गर्ने मान्छे, पश्चिम र cosmopolitanism को adherents छन् भनेर भन्छन्। "किसान समाजवाद" को समर्थकहरूको पनि Andreeva देखि निर्दयी आलोचना गर्न subjected थिए। लेख गर्न भूमिकामा एक उद्धरण Gorbachev, नीति कुनै बहाने मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त सम्झौता गर्न सक्दैन भनेर भन्छ जो प्रयोग गरिएको।
मार्च 1988 को अन्त मा एक पत्र Niny Andreevoy मिखाइल Gorbachev को जरुरी अनुरोध मा Politburo छलफल। सभामा , दिमित्री Yazov , महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध समयमा stalin को merits मा जोड दिइरहेको समर्थित शिक्षक। विजय एक नेता बिना कथित छैन हासिल गर्न सकिएन।
धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूले र लेख र पछि छलफल को उपस्थिति को समय को इतिहासकारहरूले लागि पुनर्गठन प्रमुख तत्व बन्न सक्छ। तर लेखक (Andreeva) अनुसार, उनको पत्र Prohanova Aleksandra को पदहरू जवाफ थियो।
स्नातक पछि, नीना Andreeva त्यो काम जो एउटै राज्य शिक्षकको विवाह गरे। को spouses को जीवन मा जीवनी र दृष्टिकोण धेरै समान थिए।
जन्म VI Klyushin 23 जनवरी, 1926। उच्च स्कूल पछि उहाँले Leningrad उडान स्कूल प्रवेश। शहर को घेराबन्दीको अवधिमा munitions कारखाना चक्र मा काम गरे। 1943 मा Klyushin उहाँले एक Komsomol नेता submachine कम्पनी थियो जहाँ अगाडि, गए। Leningrad लागि युद्धमा उहाँले गम्भीर 1944 मा घाइते भएको थियो। अस्पताल मानिस पहिलो टम्स्क Artillery विद्यालय सेवा पछि, त्यसपछि उहाँले शूटिंग मा एक platoon को कमान्डर भयो। म देशको रक्षा को लागि पुरस्कार र पदक धेरै थियो।
सैनिक सेवा पूरा गरेपछि Klushin को Leningrad राज्य विश्वविद्यालय प्रवेश। Zhdanov, दर्शन को संकाय। को उपाधि प्राप्त गरे पछि, उच्च स्कूल पछि उहाँले रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान मा काम गर्न गए। 1971 मा उहाँले आफ्नो डक्टरेट बचाव र एक प्रोफेसर भयो।
Klyushin Andreeva र लामो जीवनको लागि सँगै बस्थे। अक्टोबर 1996 मा, एक मानिस मरे। पत्नी छेउमा र सबै परिवारका सदस्यहरूले जताततै uncomplimentary कैफियत देखि हतारिएको जब लेट 80-एँ को तनाव, प्रभावित आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति मा। तैपनि पति Andreeva सधैं आफ्नो पत्नी गर्व, उनको समर्थन र आफ्नो दिन बाँकी समर्थन थियो।
रूसी (सोभियत) रसायनविद् नीना Andreeva perestroika को इतिहासमा योगदान र धेरै मान्छे को स्मृति मा रहनेछ। उनको लेखन छोराछोरी स्कूल इतिहास पाठ मा सिक्न। साथै, एक चिरपरिचित रसायनविद् र शिक्षक आफ्नो वैज्ञानिक काम गर्न योगदान। तर आजको युवा को बहुमत लागि यो रहनेछ एक पटक उनको बच्चाहरु भनिने "नानी-Ninulkoy", आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण र नागरिक स्थिति रक्षा, प्रणाली प्रतिरोध गर्न सक्षम थियो एक महिला।
बिल पर्ल: जीवनी र फोटो
Uayman Dzheyn: Filmography र जीवनी
रूस जवान हिरो - Epov Evgeniy Yurevich
हास्य अभिनेता र अभिनेता Voronetskiy एव्जेनी: जीवनी र काम
Ketrin Govard: जीवनी, इतिहास र रोचक तथ्य
Filmography र जीवनी Frunzik Mkrtchyan
साइट लागि बटन कस्तो छ?
केले कसरी तलना गर्न
हृदय को क्षेत्र मा बेचैनी: सम्भावित कारणहरू, उपचार
मास्को को जीवनी Matrona। भविष्यवाणी र सहयोग
"ग्यालेक्सी" - वाटर पार्क (क्रसयाया पलीना): स्की रिसोर्टमा पानीको मनोरञ्जन
अप्रिय शरीर गंध: जो यो देखिन्छ किनभने, गराउनुहुन्छ
यस कम्पनीको मिसन र निर्धारण गर्न आवश्यक
Sveltos होटल3* (लारनाका, साइप्रस): होटल को वर्णन, मूल्यांकन
व्यञ्जनहरु र विधिहरू: मा घर Aronia देखि रक्सी
"Tambuil" मोमबत्ती। प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक
ड्रीम व्याख्या: चरण, प्रदर्शन, ब्याकस्टेज, थिएटर
किचेनमा - सजावट र सान्त्वना